Daily သတင်းစာဖတျရှုပွီး – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / Daily သတင်းစာဖတျရှုပွီး
တမန်တော်မြတ်ဇာခရိစာအုပ် 2:10 - 13
(တနည်းအားဖြင့်ကျမ်းပိုဒ်အဖြစ်စာရင်း 2:14 - 17 ကမျြးစာကိုတခြားမူကွဲ၌တည်၏။)
2:10 ချီးမွမ်းခြင်းကိုရွှင်လန်းစွာသီချင်းဆို, ဇိအုန်သတို့သမီး. ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, ငါကိုချဉ်းကပ်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏အလယ်၌နေလိမ့်မည်, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ.
2:11 လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုနေ့ခြင်းတွင်သခင်ဘုရား၌မှီဝဲလိမ့်မည်, သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏အလယ်၌နေလိမ့်မည်. တဖန်သင်တို့ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသညျငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီသိရကြလိမ့်မည်.
2:12 ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မိမိအဘို့ကို၎င်းသိမ်းယူကြလိမ့်မည်, ယုဒအမျိုးကို, သန့်ရှင်းသောပြည်၌တ, ဆဲသူကယေရုရှလင်မြို့သို့ထွက် single လိမ့်မည်.
2:13 လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ထိုသခင်၏ရှေ့တော်၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေဖြစ်ပါစို့: သူသည်မိမိအဘို့သန့်ရှင်းသောကျိန်းဝပ်ရာအရပ်မှထွက်ပေါ်လာပြီ.
THe Holy Gospel According to Luke 1: 26-38
1:26 ထိုအခါ, ဆဌမလ၌, ကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလဘုရားသခင်ကစေလွှတ်ခဲ့သည်, နာဇရက်မြို့သားအမည်ရှိသောဂါလိလဲပွညျမွို့,
1:27 အမညျကိုယောသပ်ခဲ့တဲ့လူယောကျြားအပျိုကညာမှ, ဒါဝိဒ်မင်း၏အိမ်တော်; သတို့သမီးကညာ၏မာရိအမညျရှိ၏.
1:28 ထိုအဝင်ဝအပေါ်သို့, ကောင်းကင်တမန်ကလည်း: "မင်ျဂ, ကျေးဇူးတော်အားအပြည့်အဝ. သခင်ဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိ၏. မင်္ဂလာသင်အမျိုးသမီးများတွင်ဖြစ်ကြ၏။ "
1:29 ထိုမိန်းမသည်ထိုစကားကိုကြားလျှင်ပြီးမှ, သူ့စကားအားဖြင့်နှောင့်အယှက်ခဲ့သည်, သူမကဒီအဖြစ်စေခြင်းငှါ, နှုတ်ဆက်ခြင်းဘယ်လိုစဉ်းစား.
1:30 ထိုအခါကောင်းကင်တမန်ကလည်း: "မကြောက်ပါနဲ့, မာရိသညျ, သငျသညျဘုရားသခငျနှငျ့အတူကျေးဇူးတော်အားတွေ့ကြပြီများအတွက်.
1:31 အကယ်, သင်သည်သင်၏ဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေ ယူ. ရကြလိမ့်မည်, သငျတို့အားသားကိုဘွားရလိမ့်မည်, နှင့်သင်၏နာမတော်အားဖြင့်ခေါ်တော်မူ: ယရှေု.
1:32 သူကကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်, သူကအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မည်, နှင့်သခင်ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုသူ၏အဘဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ကိုငါပေးမည်. ထိုမင်းသည်ထာဘို့ယာကုပ်အမျိုး၏အိမျတျော၌စိုးစံလိမ့်မည်.
1:33 နှင့်သူ၏နိုင်ငံတော်သို့မကုန်မဆုံးရကြလိမ့်မည်။ "
1:34 ထိုအခါမာရိသည်အိန်ဂျယ်ဖို့ကဆိုသည်, "ဤအမှုကိုပြုသောခံရကြလိမ့်မည်ကိုမည်သို့, ငါသည်လူမသိရပါဘူးကတည်းက?"
1:35 နှင့်တုန့်ပြန်, ကောင်းကင်တမန်ကလည်း: "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကူးသွားပါလိမ့်မယ်, အမြင့်ဆုံးသော၏တန်ခိုးသင်လှမျးမိုးလိမျ့မညျ. ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုအမှုသည်လည်း၏, သင်၏ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံရလတံ့သောသန့်ရှင်းသောဘုရားသညျဘုရားသခငျ၏သားတျောဟုချေါခံရကြလိမ့်မည်.
1:36 ထိုအခါ, သင့်ရဲ့ဝမ်းကွဲဧလိရှဗက်သူ့ကိုယ်သူလည်းတစ်ဦး၏သားကိုပဋိသန္ဓေယူထားပါတယ်, သူမ၏အသက်ကြီး. နှင့်ဤသူမ၏မြုံသောဟုခေါ်တွင်သောသူသည်အဘို့ဆဌမလတစ်လဖြစ်ပါသည်.
1:37 အဘယ်သူမျှမစကားလုံးများအတွက်ဘုရားသခင်နှင့်အတူမဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
1:38 ထိုအခါမာရိကပြောပါတယ်: "အကယ်, ငါသည်ထာဝရဘုရား၏ကြှနျမဖွစျပါ၏. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စကားလုံးအတိုငျးအကြှနျုပျတို့၌ပွုရလိမ့်မည်။ "စို့ထိုအခါအိန်ဂျယ်သူမ၏ထံမှထွက်သွားကြ.
ကျဟရှောယ 40: 1- 11
40:1 "နှစ်သိမ့်ခံရမှာ, နှစ်သိမ့်စေခြင်း, အိုငါ၏လူမျိုး!"သင်၏ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏.
40:2 ယေရုရှလင်မြို့၏စိတ်နှလုံးအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, နှင့်သူမ၏ထွက်မခေါ်! သူမ၏ငြိုး၎င်း၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်. မိမိအပြစ်ကိုအပြစ်မှလွှတ်ခဲ့. သူမသည်သခင်၏လက်မှအားလုံးမိမိအပြစ်အတွက်နှစ်ဆလက်ခံရရှိခဲ့သည်.
40:3 တဦးတည်း၏စကားသံကိုတော၌ဟစ်ကြော်: "သခင်၏လမ်းကိုပြင်! ငါတို့ဘုရားသခငျ၏ဖြောင့်လမ်းကိုလုပ်ပါ, တောအရပျထဲမှာ.
40:4 တိုင်းချိုင့်ဝှမ်းသည်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရလိမ့်မည်, တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှနှင့်တောင်ကုန်းနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. ထိုကောက်ဖြောင့်ကြလိမ့်မည်, နှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောအဆငျ့နည်းလမ်းများဖြစ်လိမ့်မည်.
40:5 ထိုသခင်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်. ထိုအခါအတူတူလူသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ထိုသခင်၏နှုတ်အမိန့်တော်ရှိ၏သိမြင်ပါလိမ့်မယ်။ "
40:6 တဦးတည်းစကားပုံ၏စကားသံကို, "အထဲကကြွေးကြော်ရမည်မှာ!"ထိုအခါငါကပြောသည်, "ငါသည်အဘယ်သို့အော်ဟစ်သင့်တယ်?"" အားလုံးအသားကိုပေါက်သောမြက်ပင်သည်, လူအပေါင်းတို့သည်၎င်း၏ဘုန်းအသရေကိုလယ်၏အပွင့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏.
40:7 မြက်ပင်သည်သွေ့ခြောက်ခဲ့သည်, နှင့်ပန်းပွင့်ပြိုလဲခဲ့သည်. သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ကျော်လွပြီ. အမှန်ဆိုသည်ကား,, လူတို့သည်မြက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏.
40:8 မြက်ပင်သည်သွေ့ခြောက်ခဲ့သည်, နှင့်ပန်းပွင့်ပြိုလဲခဲ့သည်. ဒါပေမယ့်ငါတို့သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထာဝရအဘို့နေဆဲဖြစ်သည်။ "
40:9 ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာဧဝံဂေလိသူအသငျသညျ, မြင့်မားသောတောင်တပြင်ကိုတက်! ယေရုရှလင်မြို့၌ဧဝံဂေလိသူအသငျသညျ, အစွမ်းသတ္တိအားဖြင့်သင်၏အသံလွှင့်! ဒါကြောင့်မျှော်! မကြောက်ပါနဲ့! ယုဒမြို့ရွာတို့အားပြော: "အကယ်, သင်တို့၏ဘုရားသခင်!"
40:10 အကယ်, သခင်ဘုရားသည်ဘုရားသခင့ခွန်အား၌ရောက်လာပါလိမ့်မယ်, သူ၏လက်ရုံးအုပျခြုပျမညျ. အကယ်, ဆုလပ်တော်နှင့်အတူရှိ, နှင့်သူ၏အလုပ်သူ့ရှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်.
40:11 သူကတစ်ဦးကိုသိုးထိန်းကဲ့သို့မိမိသိုးစုကျက်စားလိမ့်မည်. သူကသူ့လက်မောင်းကိုအတူသိုးသငယ်တို့သည်အတူစုဝေးစေမည်, သူသည်မိမိရင်ခွင်မှသူတို့ကိုချီကြွလိမ့်မယ်, သူကမိမိကိုမိမိအလွန်ငယ်ရွယ်သယ်လိမ့်မည်.
မဿဲ 18: 12- 14
18:12 ဘယ်လိုကြောင့်သင်ဟန်ပါဘူး? တစ်စုံတစ်ဦးတရာသိုးတို့ကိုရှိပါက, သူတို့နှင့်တဦးကိုလမ်းလွှဲသွားပြီဆိုပါက, သူကအသက်ကိုးဆယ်ကိုးတောင်တို့အတွက်နောက်ကွယ်မှမချန်မထားသင့်ပါ, နှင့်လမ်းလွဲသွားပြီအဘယျအရှာအံ့သောငှါထွက် သွား.?
18:13 ထိုအခါသူကရှာတွေ့မှဖြစ်ပျက်သင့်ပါလျှင်: အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူကတချက်ပိုပြီးဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြောင်း, အကိုးဆယ်ကိုးလမ်းလွဲမသွားဘဲရာကျော်ထက်.
18:14 သော်ငြားလည်း, ထိုသို့သင်တို့အဘသည်ရှေ့တော်၌ထိုအလိုတော်မဟုတ်ပါ, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်, ဤသူငယ်တဦးကိုဆုံးရှုံးသင့်ကြောင်း.
ကျဟရှောယ 35: 1- 10
35:1 အဆိုပါလူဆိတ်ညံလျက်နှင့်မသွားနိုင်သောထိုပြည်၌ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်, နှင့်တညျးရာအရပ်သို့ ရောက်. ဝါကြွားကြလိမ့်မည်, ထိုသို့နှင်းပန်းများကဲ့သို့ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်.
35:2 ဒါဟာပွင့်ပေါက်နှင့်အပွင့်လိမ့်မည်ဟု, ထိုသို့ဝမ်းမြောက်သောသူနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြလိမ့်မည်ကိုခြီးမှမျး. လေဗနုန်တော၏ဘုန်းအဲဒါကိုခံရပြီ, ကရမေလ, ရှာရုန်အရပ်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်အတူ. ဤရွေ့ကားထာဝရဘုရား၏ဘုန်းအသရေနှင့်ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်အသရေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
35:3 ထိုတွေကလည်းလျော့ရဲရဲလက်တို့ကိုခိုင်ခံ့, နှင့်အားနည်းဒူးတို့ကိုမြဲမြံ!
35:4 ကိုသူရဲဘောအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ: "ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်မကြောက်ရွံ့ Take! အကယ်, သင်တို့၏ဘုရားသခင်လက်စားချေ၏ဖြောင့်မတ်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်. ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သင်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ "
35:5 ထိုအခါမျက်စိကန်း၏မျက်စိကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်နားပင်းသောသူတို့သည်နားရှင်းလင်းလိမ့်မည်.
35:6 ထိုအခါမသန်စွမ်းသူတစ်ဦးခေါကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်, နှင့်စကား၏လျှာကိုဖွေလှတျဖွစျလိမျ့မညျ. ရေကိုတော၌ဘွားကွဲပါပြီ, နှင့်တိုက်ပိတ်အရပ်တွင်လွှမ်းမိုး.
35:7 ခြောက်သွေ့ခဲ့သောပြည်တစ်ရေကန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်သွေ့ခြောက်သောမြေကိုရေစမ်းရေရှိသည်လိမ့်မယ်. မြွေ်ရှေ့တော်၌နထေိုငျဆွန်း, အဲဒီမှာကျူပင်၏စိမ်းလန်းသောထ bulrush လိမ့်မည်.
35:8 ထိုအရပျ၌တစ်ဦးနှင့်လမ်းကြောင်းတစ်လမ်းရှိလိမ့်မည်. ထိုသို့သန့်ရှင်းရာလမ်းဟုခေါ်တွင်စေပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါကိုညစ်ညူးစေမရှောက်မသွားမည်မဟုတ်. ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အဖြောင့်မတ်လမ်းကြောင်းကိုဖွစျလိမျ့မညျများအတွက်, မိုက်မဲသောကြောင့်တလျှောက်လှည့်လည်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်.
35:9 ထိုအရပျ၌အဘယ်သူမျှမ, ခြင်္သေ့ရှိလိမ့်မည်, နှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကြောင့်တက်မည်မဟုတ်, မဟုတ်သလိုအဲဒီမှာတှေ့ရ. သာလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေအရပျ၌ကငျြ့ပါမညျ.
35:10 ထိုအခါသခင်၏ရွေးနှုတ်သောကူးပြောင်းလိမ့်မည်, သူတို့ကချီးမွမ်းလျက်နှင့်ဇိအုန်တောင်ထံသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်. ထာဝရဝမ်းမြောက်သောစိတ်မိမိတို့ခေါင်းပေါ်အပေါ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်. သူတို့ကဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရယူကြလိမ့်မည်. နာကျင်မှုနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းသည်ပြေးသွားလိမ့်မည်.
လုကာ 5: 17- 26
5:17 ထိုသို့ဖြစ်ပျက်, တယောကျနေ့တှငျ, သူသည်နောက်တဖန်ထိုင်ချလိုက်ကြောင်း, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်း. နှင့်ဖာရိရှဲနှင့်အနီးအနားရှိထိ​​ုင်လျက်, ပညတ်တရား၏ဆရာဝန်တွေရှိကြ၏, ဂါလိလဲပြည်နှင့်ယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမြို့ကနေလာခဲ့တဲ့. ထိုအခါသခင်၏တန်ခိုးတော်ကိုပစ္စုပ္ပန်ခဲ့, သူတို့ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ.
5:18 ထိုအခါ, အချို့သောယောက်ျားအောက်ပိုင်းသေနေသူတစ်ဦးယောက်ျား၏အိပ်ရာအတွက်တင်ဆောင်လာသောခဲ့ကြ. ထိုသူတို့သညျသခင်၌ရောက်စေဖို့တစ်လမ်းရှာသောအခါ, သူ့ရှေ့မှာသူ့ကိုနေရာ.
5:19 ထိုသူတို့သညျသခင်၌ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းအရာအားဖြင့်တစ်လမ်းရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူး, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူအစုအဝေး၏, သူတို့ကအိမ်ခေါင်မိုးအထိမြင့်တက်, ထိုသူတို့ကသူ့အိပ်ရာနှင့်အတူအိမ်ခေါင်မိုးအုပ်ကြွပ်မှတဆင့်သူ့ကိုချကြကုန်အံ့, မိမိတို့အအလယ်သို့, ယေရှု၏ရှေ့မှောက်၌.
5:20 ထိုမင်းသည်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်သောအခါ, ဟုသူကပြောသည်, "လူ, သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်နေကြတယ်။ "
5:21 ထိုအခါကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့စဉ်းစားရန်စတင်, ဟုဆို: "ဒါဘယ်သူလဲ, အဘယ်သူသည်ဘုရားကိုလွန်ကျူးစကားပြောဖြစ်ပါတယ်? အဘယ်သူသည်အပြစ်ကိုလွှတ်နိုင်, ဘုရားသခင်မှတပါးအဘယ်?"
5:22 သို့သော်ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏အကြံအစည်သဘောပေါက်လာသောအခါ, ကိုတုံ့ပြန်, သူတို့ပြောဆို: "သင်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို၌အဘယျစဉ်းစားနေကြတယ်?
5:23 ပြောရပိုမိုလွယ်ကူအရာ: '' သင်၏အပြစ်သင်တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်နေကြတယ်,'သို့မဟုတ်ပြောစရာ, '' ထလော့နှင့်လမ်းလျှောက်?''
5:24 သို့သော်သင်သည်လူသားသည်အပြစ်လွှတ်မွကွေီးပျေါမှာအခွင့်အာဏာရှိကြောင်းသိစေခြင်းငှါဒါကြောင့်,"သူကလက်ခြေသေသောသူအားမိန့်, "ငါသည်ရန်သင့်အားဆင့်ဆိုရမည်: ထလော့, သင့်အိပ်ရာကိုတက်ယူ, နှင့်သင်၏အိမ်ထဲသို့သွားပါ။ "
5:25 နှင့်တပြိုင်နက်, သူတို့မျက်မှောက်၌ထ, ထိုသူသည်မုသာစကားကိုခဲ့သည့်အပေါ်အိပ်ရာကိုဆောင်, မိမိအိမျတျောသို့သှားကွ၏, ဘုရားသခင့ခြီးမှမျးသ.
5:26 ထိုအမိန်းမောတွေဝေလူတိုင်းကိုင်, သူတို့သည်ဘုရားသခင်ခြီးမှမျးသခဲ့ကြသည်. ထိုသူတို့ကကြောက်ရွံ့သေ​​ာစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏, ဟုဆို: "အကြောင်းမူကားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အံ့ဖွယ်အမှုမြင်ကြပြီ။ "
ဗာရုတ်သည် 5: 1- 9
ဖိလိပ္ပိ 1: 4-6, 8-11
1:4 အမြဲ, ငါ့အလိုရှိသမျှဆုတောင်း, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သင်တို့ရှိသမျှအဘို့ဆုတောငျးအောင်,
1:5 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုသင်၌သဟာယ၏, ပထမဦးဆုံးသောနေ့ ရက်မှစ. ယခုတိုင်အောင်.
1:6 ငါသည်ဤသဘောကျ၏ဖြစ်ကြောင်းကို: သင်၌ဤကောင်းသောအမှုစတင်နေပြီသောသူသည်စုံလင်မည်အကြောင်း, ခရစ်တော်ယေရှု၏နေ့ရက်တိုင်အောင်.
1:8 ဘုရားသခင်အဘို့အဘယ်သို့ငါ့သက်သေဖြစ်, သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နှလုံးအတွင်း, ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှအဘို့တောငျ့.
1:9 နှင့်ဤငါဆုတောငျး: သင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပိုပြီးကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှါ, ပညာအတတ်နှင့်ရှိသမျှတို့ကိုဥာဏ်နှင့်တကွ,
1:10 သငျသညျ သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကိုအတည်ပြုစေခြင်းငှါဒါကြောင့်, သငျသညျစိတျရငျးမှဖြစ်မည်အကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ခရစ်တော်၏နေ့၌ မိ. လဲစရာအကြောင်းမပါဘဲ:
1:11 တရားမျှတမှု၏အသီးနှင့်ပြည့်စုံ, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်, ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းအတွက်.
လုကာ 3: 1-6
3:1 ထိုအခါ, တိဗေကဲသာဘုရင်၏နန်းစံတဆယ်ငါးနှစ်တွင်အတွက်, ပုန္တိပိလတ်သည်ယုဒ၏ဘုရငျခံဖြစ်ခြင်း, ဂါလိလဲပြည်နှင့်ဟေရုဒ်သည်စော်ဘွား, နှင့်သူ၏ညီဖိလိပ္ပုစော်ဘွား Ituraea နှင့် Trachonitis ၏ဒေသ, Abilene နှင့် Lysanias စော်ဘွား,
3:2 အမြင့်ဆုံးသောယဇ်ပုရောဟိတ်အန္နနှင့်ကယာဖအောက်မှ: သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်ယောဟန်သည်ဆီသို့ရောက် လာ. ,, ဇာခရိ၏သား, တောလွင်ပြင်၌.
3:3 ထိုမင်းသည်ယော်ဒန်မြစ်၏ဒေသတခုလုံးသို့သွားလေ၏, အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းတရားကိုအဘို့အလိုငှါနောင်တတစ်ခုဗတ္တိဇံတရားကိုဟောပြော,
3:4 ပရောဖက်ဟေရှာယ၏တရား၏စာအုပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သိရသည်သကဲ့သို့: "တဦးတည်း၏အသံကိုတော၌ဟစ်ကြော်: သခင်ဘုရား၏အလမ်းကိုပြင်. ဖြောင့်, မိမိသွားရာလမ်း၌ Make.
3:5 ရှိသမျှသောချိုင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်, တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှနှင့်တောင်ကုန်းပေါ်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တရွေ့ရွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဖြောင့်လုပ်ရမည်. ထိုအခါကြမ်းတမ်းသောလမ်းခရီးသို့ level ကိုနညျးလမျးမြားသို့လုပ်ရမည်.
3:6 နှင့်လူသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ "
3:9 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်အာဒံအားခေါ်ဟုလြှောကျလေ၏: "မင်းဘယ်မှာလဲ?"
3:10 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ငါသည်ပရဒိသု၌သင်တို့၏အသံကိုကျွန်တော်ကြားလျှင်, ငါကြောက်လန့်ခဲ့, အဝတ်အချည်းစည်းရှိသောကြောင့်, ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝှက်ထားလေ၏။ "
3:11 သူကသူ့ကိုအားဆို၏, "ထိုအခါသင်သည်အဝတ်အချည်းစည်းရှိကြ၏သောသင်တို့၌အဘယ်သူသည်သို့ပြောသည်, သင်တို့သည်ငါမစားသင့်သောသငျသညျညွှန်ကြားထားရာမှအပင်၏အသီးကိုစားကြပြီမဟုတ်လျှင်?"
3:12 အာဒံကပြောပါတယ်, "ထိုမိန်းမ, သင်တစ်ဦးအဖော်အဖြစ်ငါ့အားအပ်ပေးတော်မူ၏ဘယ်သူကို, ထိုအပင်မှအကြှနျုပျကိုအားပေးတျောမူ, ငါသည်လည်းစား၏။ "
3:13 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဟုမိန်းမအားမေး, "သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောအဘယ်ကြောင့်?"ထိုမိန်းမသည်တုန့်ပြန်, "ဒီမြွေကိုအကြှနျုပျကိုလှည့်ဖြား, ငါသည်လည်းစား၏။ "
3:14 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်မြွေအားဆို၏: "သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်, သင်တို့ရှိသမျှသည်သက်ရှိတို့တွင်အကိုကျိန်ဆဲနေကြ, မြေကြီးသားကိုပင်သားရဲ. သင့်ရဲ့ရင်သားအပျေါမှာသငျသညျသွားလာရကြလိမ့်မည်, နှင့်မြေပြင်သင်စားရလိမ့်မည်, သင်၏အသက်တာ၏လက်ထက်ကာလပတ်လုံး.
3:15 ငါသည်သင်တို့နှင့်မိန်းမကိုအကြားရန်ငြိုးတင်ထားတော်မူမည်, သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့်သူမ၏အမျိုးအနွယ်များအကြား. သူသည်သင်၏ဦးခေါင်းကိုနှိပ်စက်မည်, နှင့်သင်သူမ၏ဖနောင့်အဘို့ချောင်းမြောင်းမည်။ "
3:20 အာဒံနဲ့သူ့ဇနီး၏အမည်, '' ဧဝကို,'' သူမသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏အမိဖြစ်သတည်း.
The Letter of Saint Paul to the Ephesians 1: 3-6, 11-12
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2018
ကျဟရှောယ 29: 17-24
29:17 ခဏထက်ပိုမိုနှင့်အကျဉ်းအချိန်မ, လေဗနုန်တောသည်အသီးအနှံများကိုလယ်သို့လှည့်လိမ့်မည်, တစ်ဝပြောသောလယ်​​ပြင်သည်တောဖြစ်စဉ်းစားလိမ့်မည်.
29:18 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, နားပင်းသောသူတို့သည်တစ်ဦးစာအုပ်၏စကားကိုနားထောငျတျောမူမညျ, နှင့်မှောင်မိုက်နှင့်မြှေးရှက်ခြင်းအထဲကမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မြင်ရကြလိမ့်မည်.
29:19 ထိုအခါနှိမ့်ချသခင်ဘုရား၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်မိမိတို့အ, လူတို့တွင်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၏သန့်ရှင်းသော One တှငျဝမျးမွောကျကွလိမျ့မညျ.
29:20 ပြံ့နှံ့သူတဦးတည်းပျက်ကွက်ပြီ, ကျီစယ်ခဲ့သည်သောသူကိုလောင်ခဲ့ပြီ, သူတို့ကိုဒုစရိုက်အပြစ်ကျော်ကိုယ်ရံတော်ရပ်နေခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့ကိုခုတ်လှဲခဲ့ကြ.
29:21 သူတို့ယောက်ျားတစ်ဦးစကားအားဖြင့်အပြစ်တရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောအဘို့, သူတို့ကတံခါးသူတို့တဘက်၌စောဒကတက်တော်မူသောသူ၏လှညျ့ စား. နိုငျပါ, ထိုသူတို့အချည်းနှီးတရားမျှတမှုကိုလွှဲ.
29:22 ဒီအတွက်ကြောင့်, အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, အာဗြဟံသည်ရွေးနှုတ်တော်မူသောသူသည်, ယာကုပ်အမျိုး၏အိမျတျော: အခုမှစပြီး, ယာကုပ်အမျိုးကိုအရှက်ခွဲကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ; ယခုမှသူ့မကျြနှာပျေါတှငျရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာမပျက်မည်မဟုတ်.
29:23 အဲဒီအစား, သူသည်မိမိသားသမီးများကိုမြင်သောအခါ, သူတို့ကသူ့အလယ်၌ငါ့လက်၏လုပျငနျးဖွစျလိမျ့မညျ, ငါ့နာမကိုသန့်ရှင်းစေသော, သူတို့ကယာကုပ်အမျိုး၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကိုသန့်ရှင်းစေကြလိမ့်မည်, သူတို့ကဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်တရားကိုဟောပြောပါလိမ့်မယ်.
29:24 စိတ်ဝိညာဉ်လမ်းလွဲခဲ့သူတွေကိုနားလည်မှုကိုသိရကြလိမ့်မည်, နှင့်ပွစျတငျကွခဲ့သူတွေကိုတရားကိုကျင့်သင်ယူကြလိမ့်မည်.
သန့်ရှင်းသောဧဝံဂေလိတရားကိုမဿဲအဆိုအရ 9: 27-31
ဒီဇင်ဘာလ 6, 2018
စာဖတ်ခြင်း: ကျဟရှောယ 26: 1 - 6
26:1 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ဒီအ canticle ယုဒပြည်ထဲမှာသီဆိုကြလိမ့်မည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ၏မြို့တော်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မည်အတွင်း: ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ, ကယ်တင်သောသခင်, တစ်ဦးကာရံတွေနဲ့နံရံတစ်ခု.
26:2 မြို့တံခါးတို့ကိုဖွင့်လှစ်သည့်, သမ္မာတရားကိုစောင့်ရှောက်သောသူသည်ကိုယ့်လူမျိုးကိုမဝင်ကြစေ.
26:3 အဟောင်းအမှားကွယ်ပျောက်သွားပြီဟု. သင်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းအစေခံပါလိမ့်မယ်: မိဿဟာယ, အကြှနျုပျတို့သညျမြျှောလငျ့ကွပွီ.
26:4 သင်တို့ရှိသမျှသည်ထာဝရသခင်ဘုရားအဘို့အတွက်ကိုးစားပြီ, သခင်ဘုရားသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည်အစဉ်အမြဲ.
26:5 သူအထွဋ်တှငျနထေိုငျသောသူတို့သည်နှိမ့်ချတင်နိုင်လိမ့်မည်များအတွက်. သူဟာမြတ်သောမြို့ကိုအနိမ့်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်. သူကကိုလျှော့ချပေးမည်, ပင်မြေပေါ်သို့. သူကဖြိုဖျက်လိမ့်မည်, ပင်ကိုမြေမှုန့်ရန်.
26:6 ခြေချနင်းတော်မူမည်: ဆင်းရဲသောသူကို၏ခြေရင်း, ထိုဆင်းရဲသော၏ခြေလှမ်းများ.
မဿဲနှင့်အညီသန့်ရှင်းသောဘုရားခရစ်ဝင်ကျမ်း 7: 21, 24 - 27
ကျဟရှောယ 25: 6-10
25:6 ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုဤတောင်ပေါ်မှာရှိသမျှသောလူမျိုးဆူအပေါ်စားသောက်စေမည်, စပျစ်ရည်ကိုပေါ်စားသောက်ရန်, တွင်းခြင်ဆီနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဆူ, တစ်ဦးကိုစင်ကြယ်စေသောစပျစ်ရည်.
25:7 ထိုမင်းသည်အကြမ်းဖက်လှဲချမည်, ဤတောင်ပေါ်မှာ, ကြိုး၏မျက်နှာကို, လူမျိုးအပေါင်းတို့ဘောင်းခဲ့သည့်နှင့်အတူ, နှင့်ပိုက်ကွန်ကို, လူမျိုးအပေါင်းတို့ဖုံးလွှမ်းခဲ့သောနှင့်အတူ.
25:8 သူကကြမ်းကြမ်းတမ်းသည်အစဉ်အမြဲအသေခံချပစ်ပါလိမ့်မယ်. ထိုအခါထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်ခပ်သိမ်းသောမျက်နှာတို့မှမျက်ရည်ကိုပယ်ရှားတော်မူပါလိမ့်မယ်, သူတစ်ခုလုံးကိုမြေကြီးထဲကမိမိလူအရှက်ကွဲကွာကြာမြင့်မည်. သခင်ဘုရား၏အမိန့်တော်ရှိ၏များအတွက်.
25:9 ထိုသူတို့ကထိုနေ့တွင်ပြောပါလိမ့်မယ်: "အကယ်, ဒီငါတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်! ကျနော်တို့ကိုသူ့အဘို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြ, နှင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါလိမ့်မယ်. ဤအမိနျ့တျောမူ၏! ငါတို့သည်သူ့ကိုအများအတွက်ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့ကြ. ကျနော်တို့ကသူ့ကယျတငျတျောမူခွငျးဝမျးမွောကျမြားနှငျ့ဝမျးမွောကျပါလိမ့်မယ်။ "
25:10 သခင်ဘုရား၏လက်တော်သည်ဤတောင်ပေါ်မှာကျိန်းဝပ်လိမ့်မည်. မောဘသည်သူ့ကိုအောက်မှာနင်းလိမ့်မည်, အမှိုက်တစ်လှည်းခြင်းဖြင့်ကွယ်ပျောက်ဝတ်ဆင်သကဲ့သို့.
သန့်ရှင်းသောဧဝံဂေလိတရားကိုမဿဲအဆိုအရ 15: 29-37
15:29 ယရှေုသညျထိုအရပ်မှလွန်ပြီးမှ, သူကဂါလိလဲအိုင်ဘေးမှာရောက်ရှိလာခဲ့. ထိုအတောင်ပေါ်သို့တက်, သူဆင်းထိုင်နေ.
15:30 တို့နှင့်ကြီးသောလူအပေါင်းတို့ကိုအထံတော်သို့ လာ. ,, သူတို့နှငျ့အတူစကားရှိခြင်း, မျက်စိကန်း, အခြေဆွံ့သေ​​ာသူ, မသန်စွမ်းသူများအတွက်, နှင့်အခြားသော. ထိုသူတို့ကသူ့ခြေရင်းမှာသူတို့ကိုနှိမ့်ချ, သူကသူတို့ကိုကုသ,
15:31 လူအစုအဝေးအံ့ဩဒါကြောင့်ဤမျှလောက်, အဆိုပါစကားစကားပြောကိုမြင်လျှင်, ခြေဆွံ့လမ်းလျှောက်, မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်မြင်တတ်သော. ထိုသူတို့ကဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုချီးမြှင့်.
15:32 ထိုအခါယရှေု, တပညျ့တျောတို့အတူတကွတောင်းဆို, ကပြောပါတယ်: "ငါသည်လူအစုအဝေးအပေါ်သနား, သူတို့သုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့ယခုငါနှင့်အတူအတည်ကြည်ခြင်းကြောင့်, သူတို့စားရန်ဘာမှရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ထိုအခါငါကသူတို့ကိုပယ်ချဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်, အစာရှောင်ခြင်း, သူတို့ကလမ်းတစ်လျှောက်မော စိုးရိမ်. ။ "
15:33 ထိုအခါတပည့်အထံတော်ကဆိုပါတယ်: "ဘယ်ကလဲ, ထို့နောက်, သဲကန္တာရထဲမှာ, ကျနော်တို့ဒါတစ်ဦးကြီးစွာသောအလုံးအရင်းကျေနပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့မုန့်ရယူမယ်လို့?"
15:34 ထိုအယေရှုက, "ဘယ်နှစ်ယောက်မုန့်သင်ရှိသည်ပါဘူး?"ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆိုပါတယ်, "ခုနစ်, အနည်းငယ်နည်းနည်းငါး။ "
15:36 ခုနစ်မုနျ့ငါးလုံးနှငျ့ငါးယူပြီး, ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပေးခြင်း, သူကဖဲ့နဲ့သူ့တပည့်တို့အားပေး၏, နှင့်တပည့်သည်လူများတို့အားပေး၏.
15:37 ထိုသူအပေါင်းတို့သည် စား. ဝကြ. နှင့်, အဆိုပါအပိုင်းအစများ၏ကျော်ကျန်ရစ်ခဲ့သောအရာကိုအနေဖြင့်, သူတို့ခုနစျပါးအပြည့်အဝခြင်းတောင်းချီ.
ကျဟရှောယ 11: 1- 10
11:1 နှင့်လှံတံယေရှဲ၏အမြစ်ကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပန်းပွင့်ကသူ့အမြစ်ကနေတက်မည်.
11:2 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်: ဥာဏ်ပညာ၏ဝိညာဉ်, အကွံဉာဏျနဲ့အသည်း၏ဝိညာဉ်, အသိပညာနှင့်ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း၏ဝိညာဉ်.
11:3 သူသည်ထိုအထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၏ဝိညာဉ်နှင့်ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်. သူကမျက်စိမြင်သည်အတိုင်းအညီတရားစီရင်တော်မူမည်မဟုတ်, မဟုတ်သလိုဆုံးမနား၏ကြားနာမှုအရသိရသည်.
11:4 အဲဒီအစား, သူကတရားမျှတမှုနှင့်အတူသူသည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ပါလိမ့်မယ်, သူတရားမျှတမှုနှင့်အတူမြေကြီးသားနှိမ့်ချဆုံးမပါလိမ့်မယ်. မိမိခံတွင်း၏လှံတံနှင့်မြေကြီးကိုဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်, မိမိနှုတ်ခမ်းအစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူမတရားသောသူတို့အတွက်သတ်မည်.
11:5 နှင့်တရားမျှတမှုသည်သူ၏ခါးခါးပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်. ယုံကြည်ခြင်းသည်သူ၏အခြမ်းမှာစစ်သည်တော်ရဲ့ခါးပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်.
11:6 တောခွေးသည်သိုးသငယ်နှင့်အတူနေကြပါလိမ့်မယ်; နှင့်ကျားသစ်သည်ဆိတ်သငယ်နှင့်အတူအိပ်ကြလိမ့်မည်; နွားသငယ်ကိုနှင့်ခြင်္သေ့သည်နှင့်သိုးအတူတကွလိုက်နာပါလိမ့်မယ်; နှင့်အနည်းငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုနှင်ထုတ်မည်.
11:7 နွားသငယ်ကိုနှင့်ဝံအတူတူအစာကျွေးပါလိမ့်မယ်; သူတို့သားငယ်များအတူတကွငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်. နှင့်ခြင်္သေ့သည်နွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားကြလိမ့်မည်.
11:8 ထိုအခါနို့တိုက်မွေးကင်းစကလေးသည်လည်းမြွေ၏ lair အထက်ကစားပါလိမ့်မယ်. နှင့်နို့ထားပြီးတဲ့သူကလေးတစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်မြွေ၏တှငျးသို့မိမိလက်ကိုထိုးလိမ့်မယ်.
11:9 သူတို့ကထိခိုက်နစ်နာစေမည်မဟုတ်, သူတို့သတ်ပစ်မည်မဟုတ်, ငါ့အလိုရှိသမျှကိုသန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာ. မြေကြီးဘို့ထာဝရဘုရား၏အသိပညာနှင့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီး, ပင်လယ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်ရေကဲ့သို့.
11:10 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ယေရှဲ၏အမြစ်, သူလူတို့တွင်ဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိ, တပါးအမျိုးသားတို့သည်အတူတူပင်တောင်းပန်သွေးဆောင်ပါ၏ရကြလိမ့်မည်, နှင့်သူ၏သင်္ချိုင်းဘုနျးကွီးသောဖွစျလိမျ့မညျ.
လုကာ 10: 21- 24
10:21 အတူတူတစ်နာရီအတွက်, သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ exulted, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ငါသည်သင့်အားဘော်ပြတောင်းပန်, ခမညျးတျော, ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို၏သခင်, သင်ပညာနှင့်သတိရှိသောဤအရာတို့ကိုဝှက်ထားလျက်နေသောကြောင့်, နှင့်သူငယ်များမှသူတို့ကိုထင်ရှားပါပြီ. ဒါဖြစ်ပါသည်, ခမညျးတျော, ဤလမ်းကိုသင်တို့ရှေ့မှာနှစ်သက်စေခဲ့သောကြောင့်,.
10:22 ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့အားအပျတျောမူပွီ. အဘယ်သူမျှမသားတော်အဘယ်သူသည်သိတော်မူ၏, ခမညျးတျောမှတပါးအဘယ်, အဘယ်သူသည်အဘခမည်းတော်ဖြစ်ပါသည်, သားတော်သည် မှလွဲ., နှင့်သားတော်ကိုသူ့ကိုထုတ်ဖေါ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်သူတို့အားအဘယ်သူကိုမှ။ "
10:23 နှင့်သူ၏တပည့်လှည့်, ဟုသူကပြောသည်: "မင်္ဂလာရှိသင်တို့ကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုမြင်သောသူတို့သည်မျက်စိများမှာ.
10:24 အကြောင်းမူကား, ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အများအပြားပရောဖကျအနွှယ်၌လည်းရှင်ဘုရင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်သောအမှုတို့ကိုမြင်စေချင်ကြောင်း, သူတို့မမြင်မိဘူး, သငျတို့သညျနားထောငျသောအရာတို့ကိုနားထောငျတျောမှ, သူတို့နားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ "
ဒီဇင်ဘာလ 3, 2018
ကျဟရှောယ 2: 1- 5
2:1 အဆိုပါစကားလုံးကကျဟရှောယ, အာမုတ်၏သား, ယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်ကိုရည်မှတ်သည်ကိုမြင်.
2:2 ထိုနောက်ဆုံးသောကာလ၌, သခင်ဘုရား၏အိမ်တော်တည်သောတောင်၏ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာကိုပြင်ဆင်လိမ့်မည်, ထိုသို့တောင်ကုန်းအထက်ညျခြီးမွှောကျပါလိမ့်မည်, လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုကစည်းဝေးကြလိမ့်မည်.
2:3 ထိုအလူမျိုးများသွားပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကပြောပါလိမ့်မယ်: "ကျွန်တော်တို့သခင်ဘုရား၏တောင်တော်သို့ချဉ်းကပ်နှင့်တက်ပါစေ, နှင့်ယာကုပ်၏ဘုရားသခငျ၏အိမျတျောမှ. ထိုမင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမိမိအကျင့်တို့ကိုသွန်သင်မည်, အကြှနျုပျတို့သညျလမျးခရီး၌ကျင်လည်လိမ့်မည်။ "ပညတ်တရားသည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကထွက်သွားပါလိမ့်မယ်, ယေရုရှလင်မြို့ မှစ. သခင်ဘုရား၏စကားတျောကို.
2:4 ထိုမင်းသည်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်စီရင်မည်, သူကလူမျိုးများကိုဆုံးမပါလိမ့်မယ်. ထိုသူတို့သညျထုလုပျသို့သူတို့၏ဓားဖောက်လုပ်ရကြလိမ့်မည်, တံစဉျသို့နှင့်သူတို့၏လှံ. တပြည်ကိုတပြည်ဆန့်ကျင်ထားကိုထားကိုမကြွမည်မဟုတ်, သူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းလေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုဆက်လက်မည်မဟုတ်.
2:5 အိုယာကုပ်အမျိုးသားတို့, ကျွန်တော်တို့ကိုချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့နှင့်သခင်၏အလင်း၌ကျင်လည်.
မဿဲ 8: 5- 11
8:5 ထိုမင်းသည်ကပေရနောင်သို့ ဝင်. ပြီးမှ, ချဉ်းကပ်တဲ့တပ်မှူး, သူ့ကိုထံတောင်းဆိုမှု,
8:6 ဟု, "သခင်, ငါ့ကျွန်အိမ်မှာအောက်ပိုင်းသေများနှင့်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးညှဉ်းဆဲမှာတည်ရှိသည်။ "
8:7 ထိုအယရှေုကလညျး, "ငါသည် လာ. ထိုသူ့ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေပါလိမ့်မယ်။ "
8:8 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, တပ်မှူးကပြောပါတယ်: "သခင်, ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းမထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါပေမယ့်ကိုသာစကားလုံးပြောပါ, ငါ၏ကျွန်အနာကိုငြိမ်းစေခံရကြလိမ့်မည်.
8:9 ငါအဘို့အ, လွန်း, အခွင့်အာဏာအောက်တွင်ထားရှိသည်လူကိုဖြစ်ကြောင်းကို, ငါ့ကိုအောက်မှာစစ်သားတွေရှိခြင်း. ထိုအခါငါတဦးတည်းအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, '' Go ကို,'' သူကဝင်, တယောက်သောသူအား, '' လာကြ,'' သူကလာ, ငါ၏ကျွန်မှ, 'ဤသလား,'' သူကပါဘူး။ "
8:10 နှင့်, ဒီကြားနာ, ယရှေုသညျအံ့ဩ. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုအောက်ပါသူတို့အားပြောဆို၏: "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၌ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်.
8:11 အကြောင်းမူကား, ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, မြားစှာဟာအရှေ့နှင့်အနောက်မျက်နှာမှလာကြလိမ့်မည်, သူတို့သည်အာဗြဟံနှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်ရကြလိမ့်မည်, နှင့်ဣဇာက်, မိုဃ်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ယာကုပ်အမျိုးကို.